Kulan looga hadlayay Is dhexgalka Bulshada oo ay SYAO ku qabatay Beledweyn +Sawirro – idalenews.com
Kulan weyn oo ay ka soo qeyb galeen Maamulka Gobolka Hiiraan, Saraakiisha Ciidamada Jabuuti ee qeybta ka ah Howlgalka Amisom, Saraakiisha Ciidamada Dowlada , Odayaasha Dhaqanka, Haweenka, Dhalinyarada, Aqoonyahanada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu qabtay xarunta Gobolka Hiiraan ee Magaalada Beledweyne.
Kulanka oo ahaa mid looga hadlaayay isdhexgalka Bulshada Gobolka Hiiraan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Ururka SYAO ee ka shaqeeya Arimaha Dhalinyarada Soomaaliyeed.
Ugu horeyn Madasha kulanka ayaa waxaa ka hadlay Madaxa Gobolada Dhexe ee SYAO Axmed Muse Mahad waxa uuna sheegay in kulanka uu yahay mid isdhexgalka Bulshada iyo sida uu iska war qab buuxa u dhxmari lahaa ciidamada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan.
Col Cusmaan Dubad Taliyaha ugu sareeyo ciidamada Jabuuti ee qeybta ka ah Howlgaka AMISOM ee Gobolka Hiiraan oo isna ka jeediyay goobta Kalmado qiiro galiyay Bulshada ka soo qeyb gashay kulanka ayaa si aad ah ugu mahad celiyay SYAO sida dhiirigalinta leh oo ay dhalinyarada Soomaaliyeed wax ugu qabtaan iyo sida ay uga damqanayaan dhibka dhalinyarada.
“Waxaan si aad ah ugu mahadcelinayaa dhamaan Madaxda SYAO iyo wakiilada ay soo dirsadeen oo sida qiimaha leh dhalinyarada ugu dhex jiro oo baahidooda u daboolayo, anaga waxaan u balan qaadeynaa inaan wax waliba oo qeyb teena ah aan gacan buuxdo siin doono “ Ayuu hadalka Raaciyay Konel Dubad Taliya Ciidamada Jabuuti ee qeybta ka ah Howlgalka Amisom.
Ibrahim Macalin C/llaahi Madaxa Barnamijyada SYAO oo isna madasha ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabaneysay ayaa u mahad celiyay dhamaan bulshada reer Beledweyn kuwaasi oo aqbalay kana soo qeyb galay kulanka SYAO ay ugu yeertay iyo sida walaaltinimada leh oo ay Ciidamada jabuuti gacanta u siiyaan walaala hood soomaaliyeed.
Waxaa uu hadalka intaasi ku daray in uu si buuxdo u iclaaminaayo in SYAO ay Maalinta Isniinta ay Garoonka Kubada Cagta Lamagaay ay ku qaban doonto tartan isboorti oo ay ka qeyb galayaan 8 kooxood abaal marino qaali ahna la gudoon siindoono.
Madaxdii iyo Masuuliyiintii ka soo qeyb gashay kulanka ayaa si isku mid ah uga mahadceliyay SYAO sida ay ugu qabato Gobolka Howlaha dhalinyarada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin, Waxa ayna ka hadlbadeen SYAO iney Barnamijyada dhalinyarada Gobolka hiiraan ay Badiso dhinacwalibana ay dhalinyarada ka dhisto.